Soo dejisan SyMenu 6.11.7419 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: SyMenu
SyMenu – waa adeeg kale oo ka mid ah menu-ka caadiga ah kaas oo kuu ogolaanaya inaad habeeyso qaababka kala duwan ee nidaamka baahidaada. Barnaamijka wuxuu ku guulaysan karaa dhamaanba ficilada menu-ka caadiga ah sida fiirinta faylasha iyo faylasha, codsiga bilowga, helitaanka kumbuyuutarrada iyo waxyaabaha kale. Muuqaal ka mid ah SyMenu waa awooda lagu soo iibsado oo lagu rakibo codsiyada la qaadan karo ee laga helo khadka internetka oo hodon ku ah codsiyada ujeedooyin kala duwan kaas oo kaddib marka geedi-socodka lagu soo saaro si toos ah loogu soo bandhigo liiska adeegga biilasha. SyMenu waa liiska ugu wanaagsan ee la qaadi karo oo aan loo baahneyn in lagu rakibo habab badan oo habka loo dejin karo iyo in lagu soo rogi karo qalabka flash-ka oo lagu ordo kombuyuutar kasta. SyMenu ayaa sidoo kale leh baaritaan la dhisay, waxay kuu ogolaaneysaa inaad sameysid sharraxaad qoraalka ah waxayna soo saari kartaa dukumiintiyada inta badan nidaamka.
Abaabulka codsiyada qaab dhismeedka heer sare ah
Xulashada ballaaran ee codsiyada la qaadan karo
Raadi codsiyada nidaamka martida ama Windows-ka
Qorshaha liiska codsiyada ka dib marka la furo qalabka korontada
Nidaamka cusub ee soo dejinta ee cusub
Soo dejisan SyMenu
Faallo ku saabsan SyMenu
SyMenu Xirfadaha la xiriira